တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: ပြည်ထောင်စုဖခင် သမိုင်း (၁၁၆)
ပြည်ထောင်စုဖခင် သမိုင်း (၁၁၆)
MYMC ပရိတ်သတ်ကြီးများအားလုံး မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ ကျွန်မတို့ Knowledge101 အစီအစဉ်လေး ပြုလုပ်ပေးဖို့ အချိန်ကျ ရောက်လာပြန်ပါပြီ။ ဒီတစ်ပတ်အတွက် တင်ဆက်ပေးဖို့ ရွေးထားတဲ့ သူကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ ဆိုရင် နိုင်ငံရဲ့အထိပ်အမြတ် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်၊ သေတဲ့အထိ နိုင်ငံ၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် တည်တည်တံ့တံ့ ရပ်တည်ပေးခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ရေးရအောင် ကြိုးပမ်းပေးသွားတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မွေးနေ့ကို ကျရောက်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့လို လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာ နိုင်ငံအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ အကျိုးဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သိသင့်သိထိုက်တယ် ထင်တဲ့အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးတစ်စုံတစ်ရာ မပါဝင်ဘဲ အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သာ ကျွန်မတို့ MYMC ကနေ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သမိုင်းနဲ့ သူရဲ့ရဲရင့်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံများကို ဂုဏ်ယူစွာ တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။။ အမှားတစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ ကဲ.. ဒါဆို ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ငယ်ဘ၀အကြောင်းကနေ စလိုက်ရအောင်နော်။
အောင်ဆန်းဇာနည် ဖေဖေါ်ဝါရီ ဆယ်သုံးဟာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါ၊
တစ်ထောင့်ကိုးရာ တစ်ဆယ်ငါး ရှေ့နေ ဦးဖာသား၊
ဇာတိ နတ်မောက် မကွေးခရိုင် သိကြများခုတိုင်၊
ကြံ့ကြံ့ခိုင်တဲ့ ဇာနည်ဘွား မိခင်ဒေါ်စုသား၊
တစ်ထောင့်ကိုးရာ လေးဆယ့်ခွန် ပြောင်းကြွ တမလွန်၊
မျက်ရည်ဖြိုင်လို့ ဘ၀င်ညှိုး ဇူလိုင် တစ်ဆယ့်ကိုး၊
ပြည်ထောင်လွတ်ရေး ကြိုးပမ်းအောင် ပြည်ချစ်ဒို့ခေါင်းဆောင်၊
ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဗိုလ်ချုပ်တို့ဖခင်၊
ကောင်းစေချင်တဲ့ မှာစကား ငါတို့ မမေ့အား။
မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ မျိုးချစ်သူရဲကောင်း၊ တော်လှန်ရေး တွေမှာ အဆက်မပြတ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးကောင်း သမား တစ်ဦး ဖြစ်တယ် ဗိုလ်ချုပ်
ဇာတာအရ မှည့်ထားတဲ့ နာမည်ကတော့ မောင်ထိန်လင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ဘယ်သူကမှ ထိန်လင်းလို့ ခေါ်လေ့ခေါ်ထမရှိဘဲ သူ့အကို ကိုအောင်သန်းရဲ့ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် မှည့်ထားတဲ့ မောင်အောင်ဆန်း လို့သာ ခေါ်ကြတော့တယ်။ နောက်ပိုင်း ဒို့ဗမာ အစည်းအရုံးကို ၀င်ရောက်တဲ့အခါ သခင်အောင်ဆန်း ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ သခင် အောင်ဆန်းရဲ့ ဂျပန်အမည်ကတော့ အိုမိုဒါမွန်ဂျီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက် ရဲဘော် သုံးကျိပ်ဝင်များ ဗိုလ်အမည်ခံရာကနေ ဗိုလ်တေဇဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးကတော့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်တဲ့ နေရာမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမည်နဲ့ ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှာ သူအပါအ၀င် မွေးချင်းမောင်နှမ ၈ ယောက်ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ 1) မခင်ညွှန့် (လယ်ဝန်ကတော်) ကွယ်လွန် 2) မ၀က် (အိပ်ထောင်မပြု) ကွယ်လွန် 3) မောင်ဘ၀င်း ဘီအေ-ဘီအက်စ်စီ (ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ အတူလုပ်ကြံခံရ) 4) မရွှေမှန် (ငယ်စဉ်ကကွယ်လွန်) 5) မောင်နေအောင် (အမိန်တော်အရရှေ့နေ ကွယ်လွန်) 6) ခုနှစ်လသား အမွှာနှစ်ယောက် (ပုခက်တွင်း ကွယ်လွန်) 7) ဦးအောင်သန်း (ဘီအေ) (မကွေးအရှေ့မြောက်ပိုင်း လွှတ်တော်အမတ်) ကွယ်လွန် 8) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မွေးဖွားတုန်းက သိပ်မထူးဆန်းပေမယ့် ထိုင်နိုင်ထနိုင်တဲ့ ကလေးဘ၀ကစပြီး ထူးခြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တော်တော်လည်း ဂွကျသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ် ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော်နဲ့ စကား မပြောတာကြောင့် လူကြီးမိဘများက ဆွံ့အ နေသလားဆိုပြီး စိုးရိမ် ကြောင့်ကြခဲ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်က ငယ်ငယ် တုန်းက ချူချာတဲ့အပြင် အစားလည်းကြူးပြီး အမဲသား ငါးကို အလွန်ကြိုက်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက မိခင်နဲ့ ဈေးဝယ်လိုက်သွားရင်း အမဲသားစိမ်းမြင်တာနဲ့ အတင်းလုစားမယ်လုပ်တယ်လို့ သူရဲ့မိခင်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေကို အမြင်မကြည်ဖြစ်ပြီး အဲ့လိုလူတွေကြားထဲမှာ သိပ်လည်းနေသားမကျခဲ့ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်နေချင်တဲ့ပုံစံက လူရိုင်းပြီး ကြမ်းတမ်းခက်ထန်ပေမယ့် တည်ကြည်ပြီး လွတ်လပ်သန်စွမ်းတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ငယ်ငယ်တုန်းက အတီးအမှုတ်၊ အကအခုန် အတော် ၀ါသနာပါခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် ဆိုင်းတီး တာကို အတော်ဝါသနာ ပါတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ စားပွဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခေါက်စရာတွေ့ရင် လက်ကွဲတဲ့အထိ အမြဲတမ်း ခေါက်နေလေ့ ရှိပါတယ်။ များသော အားဖြင့် ဣနြေ္ဒကြီးပြီး ချောင်တချောင် မှာကပ်ပြီး မှိုင်ကာ စဉ်းစားနေလေ့ရှိပြီး ကစားခုန်စား သိပ်လုပ်လေ့လုပ်ထ မရှိပေမယ့် ကစားတဲ့အခါ ကြမ်းတမ်းပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့ ကစားနည်းကိုမှ နှစ်သက်တတ်ပါတယ်။ မျက်နှာလို မျက်နှာရနဲ့ အထက်လူကြီးတွေကို တိုင်တောခြင်းကို ငယ်ငယ်ကတည်းက အထူးစက်ဆုပ် ရွံ့မုန်းခဲ့သူဖြစ်တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မိဘနှစ်ပါးလုံးမှာ ဥာဏ်ရည်ထက်မြတ်သောသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ဖခင်က ရှေ့နေစာမေးပွဲမှာ ဗမာပြည်တပြည်လုံး တတိယစွဲခဲ့ပါတယ်။ အကိုများ၊ ၀မ်းကွဲညီအစ်ကိုများ နဲ့ ဦးလေးတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ ကျောင်းစာမေးပွဲမှာ ထိပ်တန်းကျကျ အောင်မြင်ခဲ့ကြသူချည်းပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိဘ များကလည်း ပညာရေးကို အထူးလိုလားကြတဲ့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အစ်ကိုတွေကိုငါးနှစ်သား အရွယ်ကစပြီး ကျောင်းထားခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကတော့ အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး အလိုလိုက် ထားတာကြောင့် အသက် ၈နှစ်ရောက်မှ ကျောင်းစနေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။။ ဒါတောင် အစ်ကိုက ရှင်ပြုတာအားကျပြီး ရှင်ပြုချင်လို့ ကျောင်းနေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။။ ကျောင်းတက်တော့လည်း အတန်းကျောင်း တက်ခဲ့ရတာကြောင့် စာသင်နှစ် ၄ နှစ်တည်းနဲ့ ၁၀တန်း အောင်မြင် ခဲ့ပါတယ်။။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ သတ္တမတန်းစာမေးပွဲမှာ ဗမာတစ်နိုင်ငံလုံး န၀မစွဲခဲ့ပြီး အထက်တန်း စကေားလားရှစ် ရခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျောင်းနဲ့ အမျိုးသားကျောင်းများမှာလည်း ပထမစွဲခဲ့ပြီး ဦးရွှေခိုဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အထက်တန်းပညာရေးကို နတ်မောက်နဲ့ ရေနံချောင်းတို့မှာ သင်ယူပြီးနောက် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှာ ၆ နှစ်ခွဲလောက်နေခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်စာပေ၊ ခေတ်သစ်သမိုင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံတို့ကိုလည်း သင်ယူခဲ့ပါသေးတယ်။။ နိုင်ငံရေးစိတ်သန်မှုကြောင့် ကျောင်းစာများကို မလေ့လာနိုင်တဲ့အတွက် (ဘီ-အေ) အတန်းအထိ အောင်ယုံသာအောင်ခဲ့ပြီး (ဘီ-အေ) အထက်တန်းနှစ်တွင် ကျောင်းသားသပိတ် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ရှုပ်သဖြင့် (ဘီ-အေ) စာမေးပွဲကို တစ်နှစ်မဖြေဘဲ နေခဲ့ရပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီနောက် (ဘီ-အယ်လ်) အတန်းကိုတက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ အတန်းလည်းမှန်မှန်မတက်၊ စာအုပ်လည်းမရှိ၊ မှတ်စုလည်းမထား၊ စာလည်းမကြည့်၊ သူစိတ်သန်ရာ နိုင်ငံရေးကိုသာ လိုက်စားခဲ့တာကြောင့် (ဘီ-အယ်လ်) ပထမနှစ်စာမေးပွဲကို ကျရှုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါက ဗိုလ်ချုပ်ဘ၀တွင် ပထမဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးကျရှုံးခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဥပဒေရာဇ၀င် ပထမမေးခွန်းမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်က ပထမရခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ (ဘီ-အယ်လ်) နှစ်မှာတော့ နှစ်စေ့အောင် ကျောင်းမနေတော့ပါ။ အကြောင်းအရင်းကတော့ ဥရောပတိုက်မှာ မြူးနစ်စာချုပ် မချုပ်ဆိုမီ စစ်ဖြစ်မလို ဖြစ်နေတဲ့ခြေအနေနဲ့ ဗမာပြည်မှာလည်း အထိကရုန်း အခြေအနေတွေကြောင့် တိုင်းပြည်အတွက် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက် နှစ်ဝက်မှာကျောင်းထွက်ပြီး သခင်ဘ၀သို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပါတော့တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွင် အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး အဲ့ဒီအဖွဲ့ကထုတ်ဝေတဲ့ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းမှာ အယ်ဒီတာ အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၃၆ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိကြီး တစ်ဦးကို ရည်ညွှန်းထားတဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်တဲ့ ငရဲခွေးကြီး လွတ်နေသည် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို အမည်မဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက် ကိုနု (သခင်နု)နှင့် အတူတကွ တက္ကသိုလ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် သမိုင်းမှာ ကျောင်းသားသပိတ်ဆိုပြီး ဖြစ်လာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျောင်းကထုတ်တဲ့ အမိန့်ကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်း ခဲ့ရတယ်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သမဂ္ဂနဲ့ ကျောင်းသားသပိတ် မန္တလေးကို ကူးစက်ပြီး နောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ နှစ်ရပ်လုံးမှာ ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲ အစိုးရက သူ့ကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ကော်မတီမှာ ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ကျောင်းသားနိုင်ငံရေးမှ အမျိုးသားရေးသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှဆန့်ကျင်ရေးသမားနှင့် ယုံကြည်မှုပြင်းထန်တဲ့ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး ၀င်တစ်ဦး ဖြစ်လာသောအခါတွင် သခင်တစ်ဦးပါဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အသင်းကြီးကို ၁၉၃၀ ခုနှစ် မေတွင် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အသင်းကြီး၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးအဖြစ် ၁၉၄၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေစဉ် ၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံလို့ လူသိများသည့် နိုင်ငံတဝန်း သပိတ်ပွဲများကို လှုံ့ဆော် ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗမာ့ထွက်ရပ်ဂိုဏ်းကြီးကို ထူထောင်ရာမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး အဲဒီအဖွဲ့ကြီးက ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံရေး နိုးကြားသော ရဟန်းများ၊ ဒေါက်တာဘမော်၏ ဆင်းရဲသားပါတီတို့ကို မဟာမိတ် ပြုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်က အဲဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှုး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ဗိုလ်ချုပ်က ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးပါတီကို ထူထောင်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီအဖွဲ့ကို ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဟု ပြန်လည်အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ၁၉၄၀ ခုနှစ် မတ်လမှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရမ်ဂါတွင် ကျင်းပသော အိန္ဒိယ အမျိုးသားလွှတ်တော် စည်းဝေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် အစိုးရက ဗြိတိသျှတို့ကို သခင်တို့က တော်လှန်ပုန်ကန်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လှည့်လည်ပုန်းရှောင်နေခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ စစချင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကတရုတ်ပြည်သို့သွားပြီး ကွန်မြူနစ်တရုတ်များထံ အကူအညီတောင်းရန် ရည်ရွယ်သော်လည်း ဂျပန်စစ်တပ်မှ ပြည်သိမ်းတပ်များက သူ့ကိုအမွိုင်မြို့တွင် ကြားဖြတ်တားဆီးပြီး ဂျပန်ပြည်သို့သာသွားရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဂျပန်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာခဲ့ပြီး ဖူမီမာရိုကိုနိုး အစိုးရဆီက လက်နက်နဲ့ ငွေကြေးထောက်ပံမယ်ဆိုတဲ့ ကတိရလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် စစ်သင်တန်းတက်ဖို့ ရဲဘော်သုံးကျိတ် အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ဂျပန်ပြည်ကို ခဏပြည်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် မတ်လမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော် ရန်ကုန်ဟာ ဂျပန်တို့ လက်အောက်သို့ ကျရောက် သွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၃ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၁ ရက်နေ့မှာ ဂျပန်တို့က မြန်မာနိုင်ငံအား အတုအယောင် ရွှေရည်စိမ်လွတ်လပ်ရေးကို ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို စစ်ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့တပ်မတော်ကိုလည်း ဗမာ့အမျိုးသားတပ်မတော် (ဘီအင်အေ)ဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပေမယ့် ဂျပန်တို့နဲ့ပူးပေါင်းမှုကတော့ ကြာကြာတော့မခံလိုက်ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ဂျပန်များပြောတယ့် လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကို သံသယဝင်လာတဲ့အပြင် ဗမာလူမျိုးများအပေါ် ဆက်ဆံသည့် ဆက်ဆံရေး ကိုလည်း မနှစ်မြို့ခဲ့ပါဘူး။ ဂျပန်တပ်များ မဝင်ရောက်မီကပင် ဖက်ဆစ်တို့၏ အန္တရာယ်ကို ကြိုတင် သတိပေးခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်တဲ့ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်စိုးတို့၏ အကူအညီနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ဂျပန်များအား တိုက်ထုတ်ရန် အိန္ဒိယပြည်ရှိ ဗြိတိသျှအာဏာပိုင်များနှင့် တိတ်တဆိတ် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး လျှို့ဝှက်အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲခဲ့ကာ ၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်တွင် ဘီအင်အေတပ်ကို ဦးဆောင်ပြီး ဂျပန်ကျူးကျော်သူများကို မဟာမိတ်တို့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တိုက်ထုတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ကို တော်လှန်ရေးနေ့ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် စစ်အစိုးရမှ တပ်မတော်နေ့လို့ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး အောင်ဆန်းဦး၊ အောင်ဆန်းလင်း၊ အောင်ဆန်းစုကြည်စတဲ့ သား(၂)ယောက်၊ သမီး(၁)ယောက် ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဒေါ်ခင်ကြည်ရဲ့ ညီမကတော့ ကွန်မြူနစ် ခေါင်းဆောင် သခင်သန်းထွန်းနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သားအကြီးဆုံး ဦးအောင်ဆန်းဦးက အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်လျက်ရှိပြီး ဒုတိယမြောက်သား အောင်ဆန်းလင်းကတော့ ၈ နှစ်သား အရွယ်မှာ ခြံထဲကရေကန်မှာ ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အငယ်ဆုံး သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ အခုအခါ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ဦးဆောင်လျှက်ရှိပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လက်ထပ်မင်္ဂလာကို Snap Shot ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာကို အောက်ကပုံတွေ မှာ Click နှိပ်ပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်
ဗိုလ်ချုပ်က ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စာပေများကို ရေးသားခဲ့ရုံသာမက ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ၁၉၃၅ခုနှစ် ဂန္ဓလောက မဂ္ဂဇင်း ဧပြီလထုတ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ မြန်မာပြည်သူပြည်သား အများစု သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Burma and Buddhism ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ် ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၂၀)အရွယ်မှာ ‘ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရမှာ ဝေဖန်ဆန်းစစ်၍ လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနည်း' ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။ စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အညာသားလေး ဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည်နဲ့ သူရိယ မဂ္ဂဇင်းမှာ စာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့အရေး ကောင်းကျိုးကို လိုလားတာကြာင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်၊ စစ်ရေးခေါင်းဆောင် လုပ်နေရပေမယ့် တကယ်တမ်းက စာရေးဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တာလို့ သိရပါတယ်။ ၁၉၄၇ခုနှစ် မေလ (၃၀)ရက်နေ့က ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း လမ်းရှိ ဖဆပလဌာနချုပ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ဆရာများ အစည်းအဝေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်က ‘လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ အချိန်အထိတော့ ကျုပ် နိုင်ငံရေး လုပ်ရအုံးမှာဘဲ၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးလို့ ပါတီတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ကျုပ်က မပါချင်ဘူး။ ဘေးဖယ်နေမယ်။ သူများတွေလုပ်တာ ထိုင်ကြည့်ပြီး စာအုပ်ရေးမယ်’ ဆိုပြီး သူဖြစ်ချင်တာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့သေးတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မကွယ်လွန်ခင်အထိ နိုင်ငံရေး၊ ပညာရေး၊ စစ်ရေး၊ လောကီရေးရာများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေ တော်တော်များများကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရေးသားခဲ့တဲ့ စာတွေကလည်း ဖတ်ရင် တိကျရှင်းလင်းပြီး ပေါ်ပေါ်လွင်လွင် ဖြစ်အောင် ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်က ‘တကမ္ဘာ လုံးဟာ ယခုအခါ ခေတ်ပြောင်းနေတဲ့ အချိန်အခါကြီး ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကမ္ဘာကြီးနဲ့အတူ ခေတ်နောက်မကျအောင် လိုက်ကြစို့။ ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံ ကြီးမှာ ကမ္ဘာ့တေးသံ လိုက်၍ ကနိုင်တဲ့ ဗမာပြည်ကြီး ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပြုပြင်ကြစို့။ ဗမာပြည်ကြီးကို လွတ်လပ်ပြီး တိုးတက်ထွန်းကားတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင် ကြံဆောင် ကြိုးစားကြစို့။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး စစ်သားရော၊ နိုင်ငံရေးသမားရော၊ စာရေးဆရာရော၊ သတင်းစာ ဆရာရော၊ ဗမာတမျိုးသားလုံး ယခုပြောတဲ့အတိုင်း ခေတ်ပြောင်း အလုပ်ကို တူပြိုင်ပြိုင် လုပ်ကိုင်ကြပါစို့’ လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အနိုင်မခံဆိုတဲ့ ကဗျာကိုလည်း ၁၉၃၆ ခုနှစ် အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းရဲ့ အတွဲ ၆ အမှတ် ၁ တွင် ရေးသား ခဲ့ပါ သေးတယ်။
အနိုင်မခံ ငါ့အား ဖုံးလွှမ်းထားသော လကွယ်သန်းခေါင် ဤအမှောင်အတွင်းမှနေ၍ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးတတ်သော ငါ၏စိတ်ဓါတ်ကို ဖန်တီးပေးသည် နတ်သိကြားတို့အား ငါ ကျေးဇူးတင်၏။ လောကဓံတရားတို့၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လက်ခုပ်တွင်းသိုပ ကျရောက်နေရငြားသော်လည်း ငါကား မတုန်လှုပ် မငိုကြွေး ကံတရား၏ ရိုက်ပုတ်ခြင်း ဒါဏ်ချက်တို့ကြောင့် ငါ၏ ဦးခေါင်းသည် သွေးသံတို့ဖြင့် ရဲရဲနီ၏ ညွတ်ကား မညွတ် ဤလောဘဒေါသတို့ ကြီးစိုးရာဌာန၏ အခြားမဲ့၌ကား သေခြင်းတရားသည် ငံ့လင့်လျက်ရှိ၏။ သို့သော် ငါ့အားမတုန်လှုပ်သည်ကိုတွေ့ရအံ့။ နောင်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မကြောက်သည်ကို တွေ့ရအံ့။ သုဂတိသို့ သွားရာတံခါးဝသည် မည်မျှ ကျဉ်းမြောင်းသည်ဖြစ်စေ ယမမင်း၏ ခွေးရေပုရပိုက်၌ ငါ့အပြစ်တို့ကို မည်မျှပင် များစွာ မှတ်သားထားသည်ဖြစ်စေ ငါကားဂရုမပြု ငါသာလျှင် ငါ့ကံ၏ အရှင်သခင်ဖြစ်၍ ငါသာလျှင် ငါ့စိတ်၏ အကြီးအကဲဖြစ်သတည်း။
အန်တီခင်ညွန့်ရီ - ဗိုလ်အောင်ဆန်း သီချင်းလေးပါ
Download လုပ်ရန် | Ifile
ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာက သူ့ရဲ့ ‘ရုပ်ပုံလွှာ’ အဖွဲ့အနွဲ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်းကို ‘အောင်ဆန်း (သို့မဟုတ်) အရိုင်း’ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်စားရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဆရာဒဂုန် တာရာက သူ၏ ရုပ်ပုံလွှာအဖွဲ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး အကြောင်းကိုသာ အမြဲစဉ်းစားနေတတ် ပြီး ကျန်သည့်အရာတွေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ နေတတ်ပုံ၊ လူရိုင်းတဦးလိုပဲ ဆက်ဆံရခက်ပြီး ဂွတီးဂွကျ ဘယ်လောက် နိုင်ပုံ၊ သူ ယုံကြည်ရာကို တစိုက်မက်မက်နှင့် တဇွတ်ထိုး လုပ်တတ်ပုံ၊ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ အနုပညာဓာတ်ခံရှိပုံ စသည်တို့ကို လှလှပပလေး တင်စားရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ရုပ်ပုံလွှာ အဖွဲ့အနွဲ့ကိုဖတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ‘ကိုဌေးမြိုင် ပြောသလောက်လည်း ငါမရိုင်းသေးပါဘူးကွာ’ လို့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ရံတော် ဗိုလ်ထွန်းလှကို ရယ်မောပြီး ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗိုလ်ချုပ်က နိုင်ငံရေးအလုပ်တွေကြောင့် မအားလပ်နိုင်ပေမယ့် အလင်္ကာကျော်စွာ မြို့မငြိမ်းရဲ့ သီချင်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ညည်းတွားနေတတ် သေးတယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်က ‘ဗမာအက၊ ဗမာဂီတ တွေဟာ ဟိုဘက်က လှည့်လာတာတွေရှိတယ်။ ဒါတွေကို စုံစမ်းရမယ်။ အာရှတိုက်သားတွေ တဦးနဲ့တဦး ဘယ်လို ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်ဆိုတာ လေ့လာရမယ်၊ ကျွန်တော်လည်း အနုပညာသမားပါဗျာ’ လို့လည်း ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှာလည်း အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခံစားတတ် ဂုဏ်ယူတတ်တဲ့ စိတ်ကလေး ကိန်းအောင်းနေခဲ့သေးတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ကလီမင့်အက်တလီတို့ဟာ လန်ဒန်မြို့မှာ တစ်နှစ်အတွင်း မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးကို ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ကြခြင်းပါတယ်။ လူအချို့က ဗိုလ်ချုပ်ကို ကရင်လူမျိုးတို့အား ဗြိတိသျှတို့အပေါ်တွင် သစ္စာရှိမှု၊ ဂျပန်နှင့် ဘီအိုင်အေတပ်များကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတို့ကို အကြောင်းပြုနှိပ်ကွပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်အတွင်းတုန်းက သူကြီးတစ်ဦးကို ကွက်မျက်မှုနှင့် အရေးယူရန်လည်း ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အခြားတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ ပင်လုံညီလာခံ တွင် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဖော်ဆောင်သည့် သက်သေအဖြစ် ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီမှာ ဖဆပလက တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် နေရာ ၂၀၂ နေရာအနက် ၁၉၆ နေရာကို ရရှိ အနိုင်ယူခဲ့ပြီးတော့ ဇူလိုင်လမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲများကို ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ `ဆိုရန်တာဗီလာ´မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးမရမီ လအနည်းငယ် အလိုမှာတော့ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အတူ သူရဲ့အစ်ကိုဦးဘဝင်း အပါအဝင် အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသော ကက်ဘိနက်ဝန်ကြီး ခြောက်ဦးတို့နှင့်အတူ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ လုပ်ကြံမှုက သူ့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူ ဂဠုန်ဦးစောရဲ့ လက်ချက်လို့ယူဆရတဲ့အပြင် ဦးစောရဲ့ တရားခွင်စစ်ဆေးချက်များမှာလည်း သံသယဖြစ်စရာများ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံခဲ့ရပေမယ့် လွှတ်တော်ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးနုက တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို အရှိန် မပျက် ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း လွတ်လပ် ရေးရဲ့ အရသာကိုတော့ ခံစားခွင့် မရလိုက်ပါဘူး။
BBC ကတင်ဆက်တဲ့ Who Really Killed Aung San ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရတာကို ပြန်လည်ရှင်းပြ တင်ဆက်ထားတဲ့ Video ပါ
၁၉၁၅။ ။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ ၁၂၇၆ တပေါင်းလဆန်း ၁ ရက် စနေနေ့တွင် မကွေးတိုင်း နတ်မောက်မြို့၌ဖွားမြင်သည်။ ဗေဒင်ဆရာက ဇာတာတွင် ထိန်လင်းဟု အမည်ရေးသောလည်း အကိုဖြစ်သူ အောင်သန်းနှင့်လိုက်ဖက်အောင် အောင်ဆန်းဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
၁၉၂၂။ ။ အသက် ၇ နှစ်တွင် နတ်မောက်မြို့ ဆရာတော် ဦးသောဘိတထံတွင် ကျောင်းနေခဲ့သည်။
၁၉၂၈။ ။ ရေနံချောင်းအမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်ိးသို့ ပြောင်းနေခဲ့သည်။
၁၉၃၀။ ။ သတ္တမတန်းအောင်ကာ ဦးရွှေရိုးစကောလားရှစ်ရသည်။ တစ်လ ၁၀ဖြင့် သုံးနှစ်စာ စကောလားရှစ်ရခဲ့သည်။
၁၉၃၂။ ။ ရေနံချောင်း အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းမှ အထက်တန်းအောင်ကာ ရန်ကုန်တက္တသိုလ်ရောက်သည်။
၁၉၃၄။ ။ ဥပစာတန်းအောင်သည် (စာမေးပွဲခုံအမှတ် ၂၃၁)။ တကသ အမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။
၁၉၃၅-၃၆။ ။ တကသအမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရာ အရွေးခံရသည်။ အိုးမဝေမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်စဉ် အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း၌ "ခွေးသရမ်းကြီးလွတ်နေသည်" (Hell Hound At Large) ဆောင်းပါးရေးသူကို ထုတ်ဖော်မပြောသဖြင့် တက္ကသိုလ်မှ ထုတ်ပယ်ခံရသည်။
၁၉၃၆။ ။ တကသ ဒုဥက္ကဌရွေးချယ်ခံရသည်။ ရန်ကုန်မြို့ ဂျူဘာလီဟောခန်းမ၌ ကျင်းပသော ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ညီလာခံတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။
၁၉၃၇။ ။ အင်္ဂလိပ်စာပေ၊ ဥရောပရာဇ၀င်၊ နိုင်ငံရေးဗေဒ ဘာသာရပ်များဖြင့် ၀ိဇ္ဇာတန်း အောင်မြင်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပဲခူးဆောင် သဟာရနှင့် စာဖတ်အသင်း ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ပဲခူးဆောင် အခန်းအမှတ် (၁၁၃)တွင် နေခဲ့သည်။
၁၉၃၇-၃၈။ ။ တကသဒဥက္ကဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဥက္ကဌအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်သည်။
၁၉၃၈။ ။ ဥပဒေသင်ကြားနေရာမှ၎င်း၊ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂဥက္ကဌ နေရာမှ၎င်း နှုတ်ထွက်သည်။ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသော နယူဘားမား သတင်းစာ အယ်ဒီတာအဖွဲ့တွင် ခေတ္တ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်သည်။ ပထမဦးဆုံး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကိုယ်စားလှယ် တက္ကသိုလ်ကောင်စီဝင်အဖြစ် တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။ အောက်တိုဘာလတွင် သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ဦးဆောင်သော တို့ဗမာအစည်းအရုံးသို့ ၀င်ရောက်သည်။
၁၉၃၈-၃၉။ ။ တကသဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
၁၉၃၉။ ။ ဇန်န၀ါရီလတွင် ရန်ကုန်အရေးတကြီး လုံခြုံရေးအက်ဥပဒေဖြင့် (၁၅)ရက် ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၅)ရက်နေ့ သန်းခေါင်ကျော် ၂ နာရီခွဲတွင် ကျင်းပသော ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ အသင်းအလုပ် အမှုဆောင် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက် ညနေ ၅နာရီတွင် ဗမာပြည် နန်းရင်းဝန်၊ မြို့မိမြို့ဖ အဖွဲ့ဝင်လူကြီးများနှင့် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ (ကျောင်းသားသပိတ် အရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သည်။ ဧပြီ ၆ ရက်မှ ၉ ရက် အထိ ကျင်းပသော မော်လမြိုင်ညီလာခံတွင် အတွင်းရေးမှုးအဖြစ် တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်သည်။ သြဂုတ်လ ၁၃ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်ရေကျော်ရပ် တို့ဗမာအစည်းအရုံး တည်နေရာ၌ သခင်ဆောင်ဆန်း၊ သခင်လှဖေ၊ ကိုသိန်းဖေ၊ ကိုဗဟိန်း၊ မစ္စတာဒတ္တားတို့သည် တို့ဗမာအစည်းအရုံး အတွင်းတွင် ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့လေးတရပ် စတင်ဖွဲ့စည်းသည်။ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း ၄၉လမ်း အိမ်နံပါတ် ၁၈၈တွင် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီကို လျှို့ဝှက်စွာတည်ထောင် ဖွဲ့စည်းပြီး သခင်အောင်ဆန်းက အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ဒေါက်တာဘမော်အိမ်၌ ကျင်းပသော အစည်းအဝေး၌ ထွက်ရပ်ဂိုဏ်း၏ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်ေ န့တွင် မြေအောက်တော်လှန်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ကို စတင်တည်ထောင်ကာ သခင်အောင်ဆန်းအား ပြည်ပခေါင်းဆောင်အဖြစ် တင်မြှောက် ကြသည်။
၁၉၃၉ ဒီဇင်ဘာလမှ ၁၉၄၀ ဇန်န၀ါရီလ အတွင်း ဗမာတစ်ပြည်လုံးသို့ တရားလှည့်လည် ဟောပြောခဲ့သည်။
၁၉၄၀။ ။ မတ်လ ၂၂ရက်နေ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရမ်းဂါးမြို့တွင် ကျင်းပသော အိန္ဒိယအမျိုးသား ကွန်ဂရက်ညီလာခံသို့ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်ခင်အောင်၊ သခင်တင်မောင်၊ သခင်ဆင်ဂူပတား၊ ကိုထွန်းရှိန် (ဗိုလ်ရန်နိုင်)၊ ကိုဗဟိန်း တို့နှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့ကာ မေလ ၅ရက်၌ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်သည်။ ဇွန်လ ၂၉ ရက်တွက် ဟင်္သတခရိုင် ရာဇ၀တ်ဝန် မစ္စတာဇေးဗီးယားက ဇွန်လ ၁ရက်နေ့ ဇလွန်မြို့၌ ချင်းတောင် အကြောင်း ဟောပြမှုဖြင့် သခင်အောင်ဆန်းကိုဖမ်းရန် ၅ ကျပ်တန် ၀ရမ်းကို ထုတ်ခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် သခင်လှမြိုင်နှင့်အတူ ဟိုင်လီအမည်ရှိ သင်္ဘောဖြင့် ဗမာပြည်မှ တရုတ်ပြည်သို့ လျှို့ဝှက်စွာ ထွက်ခွါခဲ့ကြသည်။ သြဂုတ်လ ၂၄ရက်နေ့တွင် တရုတ်ပြည် အမွိုင်သို့ ရောက်ရှိကာ ထိုမှတဆင့် နိုဝင်ဘာ ၁၂ရက်နေ့တွင် ဂျပန်ပြည် တိုကျိုမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
၁၉၄၁။ ။ မတ်လ ၃ရက်နေ့တွင် ဗမာပြည်သို့ပြန်လာပြီး မတ်လ ၉ ရက်နေ့၌ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ထဲမှ ပထမအသုတ်လူငယ်တစ်စုကို တပါးတည်းခေါ်ယူပြီး ဂျပန်ပြည်သို့ လျို့ဝှက်စွာ ပြည်လည် ထွက်ခွာခဲ့သည်။ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်ပြည်တိုကျိုမြို့သို့ ပြန်လည် ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၀ရမ်းပြေးနေစဉ် တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၁၉၄၁ စနေနေ့ည ၁ နာရီအချိန်တွင် ယိုးဒယား ပြည်ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ဦးလွန်းဖေ၏နေအိမ်တွင် ဘီအိုင်အေ ခေါ် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်ကို စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး လက်မောင်းသွေး ဖောက်သောက်ကြသည်။
၁၉၄၄။ ။ သြဂုတ်လ ၄ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်ပြီး ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်ကြီး (ဖဆပလ) ကို ပဲခူးမြို့ဗမာ့တပ်မတော် တိုင်း ၄ စခန်း၌ လျို့ဝှက်စွာ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဖွဲ့စည်းရာ၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်ုးသည် ဖဆပလ ဗဟိုဦးစည်း အဖွဲ့တွင်၎င်း၊ ဖဆပလ ဗဟိုစစ်ကောင်စီတွင်၎င်း၊ စစ်ရေး ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။ သြဂုတ်လ ၂၃ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ပတ်လမ်းနှင့် ဦးထွန်းမြင့် လမ်းထောင့်ရှိ စစ်ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နေအိမ်၌ ဗမာ့တပ်မတော် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ပြည့်သူ့အရေးတော်ပုံ ပါတီတို့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းသော ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်ကို ပြည်လည်ဖွဲ့စည်းသည်. စက်တင်ဘာ ၃ ရက်တွင် ဗိုလ်မှူးကြီး စောကြာဒိုး၊ ဗိုလ်ကြီး စောစံဘိုးသင်၊ ဗိုလ်မှူးရဲထွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကတော် ဒေါ်ခင်ကြည့်နှင့်အတူ မြောင်းမြမြို့သို့ ရောက်လာကြသည်။ စက်တင်ဘာ ၇ရက်တွင် ဗိုလ်မှူးကြီး စောကြာဒိုး၊ ဗိုလ်ကြီးစောစံဘိုးသင်၊ ဒုဗိုလ် သိန်းဆွေ၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ဇေယျ၊ ဗိုလ်မှူးရဲထွက်တို့နှင့်အတူ ပုသိမ်ခရိုင် ကန်ကြီးထောင့်ရွာသို့ ခရီးထွက်ကြသည်။
၁၉၄၇။ ။ ဇန်န၀ါရီ ၂ရက်တွင် သခင်မြ၊ ဦးတင်ထွတ်တို့နှင့် အတူ ဘိလပ်သို့ သွားသည်။ ဇန်န၀ါရီ ၅ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ်အချိန်တွင် ဒေလီရေဒီယိုမှ ဗမာပြည်သို့ ဟူသော မှာကြားချက် မိန့်ခွန်းကို အသံလွှင့်သည်။ အာရှညီညွတ်ရေးသို့ ဟူသော ဗိုလ်ချုပ်အသံသွင်း မိန့်ခွန်းကိုလည်း ထိုနေ့ည ၈ နာရီခွဲအချိန်တွင် ဒေလီရေဒီယိုမှ အသံလွှင့်သည်။ ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် အက်တလီ ခေါင်းဆောင်သော ဗြိတိသျှကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့ ဆွေးနွေးပွဲကို လန်ဒန်မြို့အမှတ် ၁၀ ဒေါင်းနင်းလမ်းရှိ ဗြိတိသျှ ၀န်ကြီးချုပ်ဂေဟာ၌ ကျင်းပသည်။ ဇန်န၀ါရီ ၂၈ ရက်တွင် အောင်ဆန်း အက်တလီစာချုပ်အား လက်မှတ်ထိုးသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ ရန်ကုန် ပြန်ရောက်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်လုံမြို့သို့ သွားရောက်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ ပင်လုံစာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ မြို့တော်ခန်းမတွင် ကျင်းပသော မြို့တော်ဝန်၏ ဧည့်ခံပွဲ၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဗမာပြည် အင်္ဂလိပ် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။ မတ်လ ၁၅ ရက်မှ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့အထိ လေကြောင်းခရီးဖြင့် မြိတ်၊ ထားဝယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့များသို့ ခရီးထွက်သည်။ မတ်လ ၁၇ရက်နေ့ ညနေ၄နာရီအချိန်တွင် မော်လမြိုင်မြို့ ဘုရင်မပန်းခြံတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျောက်ဆည်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် တရားဟောသည်။
1947 ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အင်္ဂလန်သို့သွားစဉ်ြှဗိတိသျှ ၀န်ကြီးချုပ် အက်တလီနှင့် Video မှတ်တမ်း မတ်လ ၂၁ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် တရားဟောသည်။ မတ် ၂၃ ရက် ညောင်ဦးမြို့တွင် တရားဟောသည်။ မတ်လ ၂၄ ရက် မကွေးမြို့တွင် တရားဟောသည်။ မတ်လ ၂၅ ရက် တွင် နတ်မောက်မြို့တွင် တရားဟောသည်။ မတ်လ ၂၇ ရက် အာလံ (အောင်လံ) တွင် တရားဟောသည်။ ထိုနေ့တွင်ပင် ရန်ကုန် ပြန်ရောက်သည်။ ဧပြီလ ၁ ရက်တွင် လေယာဉ်ဖြင့် စစ်တွေသို့ ခရီးထွက်သည်။ ထိုညနေတွင် ရေတပ်မတော်မှ စစ်သင်္ဘောဖြင့် မြေပုံမြို့သို့ ခရီးဆက်သည်။ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမှ ရန်ကုန်သို့ လေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လာသည်။ ဧပြီလ ၄ ရက်တွင် အုတ်တွင်း တောင်ငူ ပျဉ်းမနားမြို့များတွင် တရားဟောသည်။ ဧပြီလ ၅ ရက်တွင် ပျော်ဘွယ်၊ တပ်ကုန်း၊ ရမည်းသင်းမြို့များတွင် တရားဟောသည်။ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီတွင် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့် အတူ မဲရုံများသို့ လိုက်လံစစ်ဆေးသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်ဦးဆောင်သော ဖဆပလ အဖွဲ့သည် မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိသည်။ ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့ နေလယ် ၂ နာရီတွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် ပါမောက္ခ ရန်ပင်လော့နှင့် တွေ့ဆုံသည်။ ဧပြီလ ၁၇ရက် နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ကန်တော်ကြီးစောင်း အိုရီယန့်ကလပ်၌ ယိုးဒယား အစိုးရနှင့် ဗီယက်နမ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တော်များ ဧည့်ခံပွဲ တက်ရောက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။ ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် နှစ်သစ်ကူး မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။ ဧပြီလ ၂၈ရက်နေ့ မန္တလေးသို့ လာသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အသံနဲ့ ရှားရှားပါးပါးမိန့်ခွန်းကို အောက်မှာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ နားဆင်ဖို့ Play ကိုနှိပ်ပါ။
ကြိုက်လို့ သိမ်းထာချင်သူတွေအတွက် Speech 1 - ifile | Speech2- ifile
မေလ ၄ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်နေအိမ်၌ ဖဆပလ ကိုယ်စားလှယ်များ ဆိုရှယ်လစ် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပရသဖ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး နယ်များတွင် ပြည်သူ့ရဲဘော်နှင့် ဆိုရှယ်လစ်များ မသင့်တင့်သည့် ကိစ္စများဖြေရှင်းပေးသည်။ မေလ ၆ ရက်နေ့ည ၈နာရီတွင် ပြည်လမ်း ပဲခူးကလပ်၌ မျက်နှာဖြူ ကုန်သည်ကြီးများ နှင့် ဆွေးနွေးသည်။ မေလ ၈ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီအချိန်တွင် ပသျူးအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည့် ဒေါက်တာ ဘဟာနုဒင်နှင့် မစ္စတာ ဂျာဇန်ဇူလေမန်တို့ကို လက်ဖက်ရည်ပွဲနှင့် ဧည့်ခံသည်။ မေလ ၁၀ရက်နေ့ ညနေ ၃နာရီအချိန်တွင် သတင်းစာဆရာများကို အရေးပေါ် အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး ဦးဘဖေကို ၀န်ကြီးအဖွဲ့မှ ထုတ်ပယ်သည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။ မေလ ၁၂ရက်နေ့ည ၈နာရီတွင် အမေရိကန် သံအမတ် မစ္စတာ ပက်ကာ၏ နေအိမ်တွင် ကျင်းပသည့် ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်သည်။ မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ယိုးဒယားဘုရင်ရဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်ဖြစ်သော မင်းသမီး ချန်ဘောနှင့် သမီးတော အာစီ မင်းသမီးတို့ကို တာဝါလိန်းနေအိမ်၌ ညစာဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးသည်။ မေလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဖဆပလ ပဏာမ ညီလာခံ ကျင်းပသည်။ မေလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဗြိတိသျှရေတပ်မှ စစ်သင်္ဘော H.M.S FALE (ယခုစစ်ရေယာဉ် မေယု) အား ရေတပ်လက်ထောက် ဗိုလ်ချုပ် မစ်ချယ်က လွဲပြောင်းပေးသည်ကို အဆိုပါ သင်္ဘောပေါ်၌ပင် လက်ခံသည်။ မေလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် သတင်းစာ ကွန့်ဖရန့်ပြုလုပ်သည်။ ဇွန်လ ၁၆ရက်နေ့တွင် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ အခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သတ်သည့် လမ်းညွှန်ပြဌာန်းချက်ကို တင်သွင်းသည်။ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ဗမာပြည်ရှိ အိန္ဒိယ ငဋိညာဉ်ခံ ၀န်ထမ်းများ (I.C.S) နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည်။ ဇူလိုင်လ ၁၃ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ မြို့တော်ခန်းမမှနေပြီး လူထုသို့ မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။ ထိုမိန့်ခွန်းသည် နောက်ဆုံး ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် စနေနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်အချိန်တွင် မသမာသူလူတစ်စု၏ လုပ်ကြံမှုကြောင့် ကျဆုံးခဲ့သည်။
Written By : Nunki, ^AnGel^ Edited By : Illusion, ^AnGel^ Published By : Alinyaung, Lucifer
ဒီထဲမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ တစ်ချို့အချက်အလက်များ၊ အသံများ၊ ဗီဒီယို ဖိုင်တွေဟာ Google မှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ဆိုဒ်များဆီက သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သက်သက် တစ်ခုချင်းဆီ Credit ပေးဖို့ Site တွေများပြားတာကော၊ မမှတ်မိတာတွေကောကြောင့် အကုန်လုံး စုပြီး ဒီမှပဲ ရေးလိုက်တာ နားလည်ပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အဆင်မပြေလို့ သက်သက်ဆီ တင်ပေးစေချင်ပါက Site နာမည်တွေနဲ့ Link ကို အောက်မှာ Comment ကျေးဇူးပြုပြီး ရေးပေးခဲ့ပါ။ ဒီပို့်စ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော Resources များရဲ့ မူလပိုင်ရှင် Admin များ၊ Blogger များအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း...
Posted by www.mymclub.net
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 10:03 AM
Labels: ကဗျာ, မူလစာမျက်နှာ, ဆောင်းပါး
လေညှင်းလေးတွေ သယ်ဆောင်သော ဆောင်းလပျောက်သော နွေဦးတစ်ညမှာ မဟူရာညရောင်နှင့် အပူဆောင်ည အငွေ့အသက်တွေက ကမ္ဘာမြေပေါ်ပြန့်နှံလို့ လူတွေတောင် စိတ်ကူးပျက်သော ငြီးငွေ့သံတွေနဲ့ ချွေးတွေကိုယ်စီကျလို့ မြေခနေသော အချိန်မှာ အမေဟာအပြုံးတွေဝေကာ တို့များအတွက် အကောင်းဆုံးပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြနေသလို အေးမြသောဆုံးမသံစဉ်တွေက တို့ဘ၀အတွက် အရေးကြီးဆုံးသောဖြစ်သလို ဘယ်အရာနဲ့မှ မလဲနိုင်သော အဖိုးတန်သော အရာပင်ဖြစ်ပေသည်။ ထိုစဉ်အခါဝယ် အမေပေးသောနှလုံးသားအလှပုံပြင်တစ်ပုဒ်က အပူရောင်ပြန်နေသော ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို မေတ္တာရေကြည်ဖြန်းသလို အေးမြနေပါတော့သည်။ ထိုအချိန်ဝယ် အမေပြောနေသောပုံပြင်သံစဉ်တွေကို တို့တတွေနားစဉ်နေခိုက် အမေဟာ အပူဒဏ်ကိုကာကွယ်ပေးသေယ သီတဂူလမင်းကြီးပမာ အေမြနေသလို သားသ္မီးလေးတွေကလည်း ကြယ်ကလေးတွေပမာ အမေပေးသော မေတ္တာတွေကလွှမ်းခြုံရ်ျနေပါတော့သည်။ အော်....လောကကြီးက ဘယ်လိုပင်ပူနေပါစေ သဘာဝက ဘယ်လိုပင် ရာသီဥတုတွေပြောင်းလွဲနေပါစေ နေညတွေ ဘယ်လိုပင်ပြောင်းလွဲနေပါစေ အရာရာတိုင်းက ဘယ်လိုပင်ပြောင်းလွဲနေပါစေ အမေပေးသောနှလုံးသားက မပြောင်းလွဲတာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ လောကဓံက ဘယ်လိုပင်ရိုက်ချက်ပြင်းပါစေအုန်း အမေပေးသောနှလုံးသားက အေးမြနေမြဲပင်ဖြစ်သည်။ အဲဒါတွေဟာ အမေ့ရဲ့အနာဂါတ် မျှော်လင့်ချက်နှလုံးသားဖြစ်သလို သားသ္မီးအတွက် ဘ၀ရှေ့ရေးနျင့်အနာဂါတ်ရည်မှန်းချက်ပန်တိုင်ဆီသို့ဦးတည်နေပါသည်။ မည်သို့ဆိုစေဦးတော့ ထပ်ရ်ျဆိုဦးအံ......အမေပေးသောနှလုံးသားဟူသည် သားသ္မီးတို့၏ အသိစိတ်ဓာတ်လမ်းညွန်ပင်ဖြစ်သလို အောင်မြင်ရေး လူမှုရေး တိုးတက်ရေး ပညာရေးစသည် အားလုံးတို့၏ လမ်းညွန်ပင်ဖြစ်သည်ရေးသားရင်း ဆက်လက်ရေးသားပါဦးအံ.............။
ကျွန်တော့်ကိုမွေးခဲ့တဲ့...အမေ.. သူများအမေတွေထက် ဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်..... ကျွန်တော့်ကိုကျွေးခဲ့တဲ့...အမေ.. သူများအမေတွေထက် အကုန်များခဲ့ရတယ်..... ကျွန်တော့်ကိုချစ်တဲ့...အမေ.. သူများအမေတွေထက် စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်..... သားကို သခင်... လင်ကို ဘုရား ဆိုတဲ့ အမေ.... ကျွန်တော့်အတွက်နဲ့ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျခဲ့ရတယ်... လောကမှာ ကျွန်တော် တစ်ခြားသောအရာတွေမှာဘဲနိမ့်ကျခြင်နိမ့်ကျမယ်... မိခင်မေတ္တာနဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့.. တစ်လောကလုံးကို ရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီး ရင်ဆိုင်နိူင်ခဲ့တယ်... အဲ့ဒီလိုဆိုးခဲ့တဲ့သားက..အခု မေကြီးမေတ္တာနဲ့.. အသက်ဆက်ခဲ့တာပါ... အဲ့ဒီလိုမိုက်ခဲ့တဲ့သားက..အခု မေကြီးကရုဏာနဲ့.. လူဆက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ... ကျေးဇူး အထူးပါမေကြီးရယ်... အရာရာအားလုံးအတွက်ပါခင်ဗျာ..... သားကြီးဂတိပေးပါတယ်...မေကြီး သားအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံး.. ဒီလောကကြီးထဲမှာ... မေကြီးဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မှ စိတ်ဒုက္ခတွေ သောကဝေဒနာတွေ ဘယ်သောအခါမှ ထပ်မဖြစ်စေရပါဘူး...
Welcome To My Website တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း မှ ကြိုဆိုပါသည် ကဗျာ အလင်္ကာများ ခံစားနိုင်ပါစေ Hello Welcome to my website This is my first project
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း မွေးနေ့ 23-07-2012
တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း (ကေလနိယ တက္ကသိုလ်)
ကိုယ်ပိုင်ခံစားမှုရပ်ဝန်းထဲမှာ အရည်ပျော်ခဲ့; ခါးသီးတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့သူ; မရေရာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ နှစ်သိမ့်အားပေးရင်း; နှလုံးသားအတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေးစပ်ခဲ့ပါရဲ့; မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ သံယောဇဉ်လွင်ပြင်မှာ; လေလွင်ငှက်တကောင်ပမာ ပျံသန်းခဲ့တော့, ငါ့ဟာ အခုတော့ လေလွင့်ငှက်တကောင် ဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့.
Flash သီချင်းများနားဆင်ရန် သီချင်း(စာမျက်နာ-၁) သီချင်း(စာမျက်နာ-၂) သီချင်း(စာမျက်နာ-၃) သီချင်း(စာမျက်နာ-၄) သီချင်း(စာမျက်နာ-၅)
ဆံပင်ပုံစံများလေ့လာရန် hair.styles edwardwadsworth hair-findes beauty.about beautyworlds folica stellure hair-factor
ဖုန်းနှင့်အခြားသောဆိုဒ်များ nokia motorol thaicom alvarion vodafone o2 starhub mobile ladbrokes flybmi textmefree sms singtel beonline megafonmoscow
ချက်တင်ရနိုင်တဲ့ဆိုဒ်များ google skype messenger.yahoo get.live.com/messager/overview vzochat qq.co.za oovoochat ebuddy voipstunt internercalls aim meebome kolim person kolim
Hobby knitting.about knitting.universe spy all.babykids aristofashion costume.co.jp/suits yagi.co.jp americanrhetoric spacesounds whalesounds sinosaursounds stormsounds onlineconversion smart-resources singingfish freecycle ofoto
ဟာသလေးတွေရှိရာသို့ coolfunnyjokes fun-brain funschool cartonnetword jokesgaller funnypostcard.com cartoons unclefred comedycentral glasnergen
မြန်မာဝက်ဒ်ဆိုဒ်များ popularmyanmar allmyanmar bagan yangoncity planet myanmars shewsagar alpha modins myanmarmp3 yangon myanmar mict-part mmcgi yangonnow shwedream shwenad yadanar mchronicle visitmyanmar myanmarpyithar mail4 flashband yango foreverspace yangon myanmaryellowpages ayinepan shwedarling kyawmyothu.ne myanmardirectory.org smmyanmar.com myanmarcompytermarker weblogmm myanmarchat.ne myanmartraveonline asianjobbu edhamma first-11 myanmargoal popularmyanmar peoplemyanmar lexicanstar shwehinthar cytroncomputing trademarkmyanmar mopa jorunalpportunity wbts mcf.org etrademyanmar mmtime cherrythitsar shewchat iburmese mymyanmar nyakabar myanmarmyanmar khayanpyareinmet mit.com yamc zawinhtut likaungmyat saisaionline shinmee htooeainthin redmyanmar myanmarvcc burmeseclassic.com myanmarbible khainyanmar soemin myanmardigest myanmardotcom mrtv3.net maung hsdejong.nl/burma kaunglay05.multiply myitzuri jat.net
ပန်ချီပညာလေ့လာနိုင်ရန် painting.about simplypainting newmuseum the-gallwry-of-china .louvre moma thavibu insight-gallery acdmedia culture artseoul kodakgallery
မေးလ်သုံးနိုင်တဲ့နေရာလေးတွေ 3proxy mailgoogle unipeak mail.google glite.sayni yoyahoo hoooe yeehart gmail wwlmail 168city rediff justachat inbox 30gigs sandiego coolyork coolcafe hotmai yahoo walla fastmail mail mail.buffalo mytrashmail goowy muchomai lycos myway myspace
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဒ်များသို့ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဓမ္မရသ မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုခြင်း ဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုခြင်း ဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်း သူတော်ကောင်းတရားများ ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃာ့ လောကအသင်းကြီး ဓမ္မလက်ဆောင် ဓမ္မအလင်းရောင် ဓမ္မရနံ ဓမ္မရိပ် ဓမ္မလင်းရောင်ခြည် ဓမ္မဌာနေ ဓမ္မဟေဝန် ဓမ္မစကား ဓမ္မမေတ္တာ ဓမ္မကုန်းမြေ ဓမ္မဥယျာဉ် ဓမ္မပန်းခင်း ဗုဒ္ဓစာကြည့်တိုက် ဓမ္မဥပဒေပြန့်ပွားရေးအသင်းချုပ် ဓမ္မပဒပါဠိတော် မဟာလယ်တီ ဒီပနီကျမ်းစာ ဓမ္မဒူတ လူငယ်များအသင်း ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) အရှင်ကုမာရ အရှင်ဝိစိတ္တ (Korea) မြတ်ရောင်နီ အရှင်လောကနာထ အရှင်နန္ဒသာရ(သစ္စာရောင်ခြည်) အရှင်ကောဝိဒ(မြိတ်) အရှင်ကောဝိဒ၏ပညာဒါန အရှင်ဦးဥတ္တမသာရ အရှင်ကုသလသာမိ (ပျော်ဘွယ်) အရှင်ဉာဏဒီပ (ဓမ္မရတနာ) အရှင်သာဓိန(အလင်းသစ်) အရှင်ခေမိန္ဒ (မော်ကွန်းသစ်) အရှင်ဝိစိတ္တသာရ(ဓမ္မဂင်္ဂါ ) အရှင်ဓမ္မသာမိ(အင်္လကာ) ရဝေနွယ်(အင်းမ) သာမဏေကျော်စာသင်တိုက် တရားတော် သုခကာမီ ဥပသကာ ဝိမုတ္တိရသ စန္ဒာသူရိယ မြတ်ပန်းရဂုံ (ဓမ္မသာကစ္ဆာသဘင်) သစ္စာတရားများစုဝေးရာ ယောအသင်း စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်း ဝါတွင်းအင်္ဂါပတ် ဆွမ်းလောင်း မြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များအသင်း ထေရ၀ါဒ တို့တိုင်းပြည် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း ပညာရံသီဝိဟာရ စိတ္တသုခဘုန်းကြီးကျောင်း ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရံသီ ဗုဒ္ဓဓမ္မရံသီ(ဖန်လန်) ဓမ္မဝါဒီ အောင်မြေမင်္ဂလာ ဓမ္မရသ ဝိဟာရကျောင်း ဓမ္မရောင်ခြည်ကျောင်း ညောင်ကန်အေး(ဂျိုဟိုး) သီတဂူဓမ္မ၀ိဟာရကျောင်း သီတဂူသတင်း သီတဂူစတား မိုးကုတ် ရိပ်သာအဖွဲ့ချုပ် ပတ္တမြားရိပ်သာ (မိုးကုတ်) မဟာစည် ရိပ်သာအဖွဲ့ချုပ် ညောင်ကန်အေး(မဟာစည်) ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ(မဟာစည်) အေးရိပ်ချောင်(မဟာစည်) သဲအင်းဂူ ဝိပဿနာ ကန္နီသမထဝိပဿနာ မြေဇင်း ဝိပဿနာ ကသစ်ဝိုင် ဝိပဿနာ ထေရဝါဒတက္ကသိုလ် ကလေးဝ တောရ လောကချမ်းသာ အနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာ အဖြူရောင်မေတ္တာ သစ္စာအလင်း သုခရိပ် ချယ်ရီမြို့တော် နေခြည်သွေးသစ် သရုပ်ပြ အဘိဓာန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရွှေတိဂုံပါရမီဖြည့် မပြီးဆုံးသောနေ့ရက်များ တရား၌မွေ့လျော်ခြင်း ပျော်ဘွယ်ဆရာတော် ငြိမ်းချမ်းစွာ ရွက်ဝါ မနက်ဖြန် ရည်ရွယ်ရာ မင်္ဂလာသတင်းစဉ် အေးငြိမ်းပျော်ရွှင် စေတနာသုခ ဇီဝိတသံဃာ့ဆေးရုံကြီး ဇမ္ဗူသီရိ မြတ်ရတနာ ဓမ္မဒါန ဓမ္မရံသီစာမျက်နှာ ဓမ္မရသ နိဗ္ဗာန နိဗ္ဗာနဓမ္မ မိုးကုတ်(လန်ဒန်) မြန်မာ့ရတနာ အရှင်လောကနာထ အောင်မြေ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် အနတ္တလက္ခဏသုတ် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ BuddhaNet Dhamma Download Dhamma Web DhammaWebBooks DhammaDownload Dhamma English Buddha Net E-Dhamma Golden Words One Dollar Fund The Best Friend ပညာပါရမီ
စာကြည့်တိုက်များ မြန်မာအီးဘွခ် မြန်မာရခိုင်များ ရွှေစကား နေ့သစ်စာအုပ်စင် အဖြူရောင်မေတ္တာ အံဘုန်းမြတ်စာအုပ်စင် အိပ်မက်လှိုင်းစာအုပ်စင် ဝိညာဉ်သစ်စာအုပ်စင် ဗမာ့ကြယ်ကွန်ယက်စာအုပ်စင် ဓမ္မပဒ ပါဠိတော် မြန်မာပြန်အင်္ဂလိပ် ဓမ္မနှင့်စာပေနန်းတော် စကားဝါမြေစာကြည့်တိုက် ချယ်ရီမြို့တော်စာအုပ်စင် Myanmar Ebook Archive Myanmar Ebook Golden Myanmar Dhamma Web Books Dhamma Download Myanmar Dhamma Download English Burmese Classic Buddha Net Book Hive
မြန်မာပန်းချီပညာရှင်များ မြန်မာ့ပန်းချီ ဦးလွန်းကြွယ် ဦးစောလှိုင် ခင်မောင်ရင် ပန်းချီအောင်စိုး ချောအိသိဏ်း နေမျိုးဆေး မင်းဇော် ညိမ်းချမ်းစု လွန်းသစ် Magic Art လောကမှန်ကင်း ....
နည်းပညာဆိုဒ်များသို့ စေတန်ဂေါ့ သံလုံငယ် ညီလင်းဆက် ညီနေမင်း ဘလော့ခရီးသည် မောင်ပညာ မောင်စေတနာ ကိုThinker ကိုရန်အောင် ကိုမင်းကျော် ကိုကျော်စွာငြိမ်း ကိုဇော်357 ကို‌ဇော်(ဒဂုံ) ကိုချစ်ဦး ကိုကျော်ကျော်ဦး စပ်မိစပ်ရာ စိုင်းနက္ခတ် ဖိုးသား တူလေး ပုဂံသားမောင်ဘကျော် ရွှေမြန်မာတို့နည်းပညာ မုန်တိုင်း ရာမညဖိုးလပြည့် အလင်းရောင် အညာသား ဟိုက်ဝေး အိုင်တီခရီးသည် အိုင်တီမန်း နည်းပညာမှတ်တမ်း မာ့ခ်၏ကိုယ်ပိုင်အတ္တများ မနောသား မနောဖြူလေး မိုးမြင့်ရှိန်း မိုးထက်မြင့် လုလင်တစ်ဦး၏အတွေးဆုံမှတ် မြန်မာ့သတင်းနှင့်နည်းပညာ မလေးရှားရောက်မြန်မာ ဟင်းလင်းပြင် ကျနော့မှတ်စုစာအုပ် ကနက်သီရီသားလေး ညီညီ(လောကမီးအိမ်) ဧရာညီနောင် အီလက်ထရောနစ် ဘုရင့်နောင် ဝိုင်း Burma IT Share Co2'sNote STAMEDIA Ogre KP3 Family Kogee Lay WWM MMBloggerHelpdesk Myanmar Download MyanmarITMen My Softwares ThememagicMonGTC Troj4n Engineer4Myanmar
လေ့လာစရာဆိုဒ်များ Myanmardaily အဝါရောင်စီးပွားရေးလမ်းညွှန် Exam Collection Myanmar telt:Dictionary
ဂျာနယ်နှင်မဂ္ဂဇင်းဆိုဒ်များ အင်တာနက်ဂျာနယ် ဈေးကွက်ဂျာနယ် လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ် First Eleven မြန်မာနေရှင်နယ် လိဂ် မြန်မာတိုင်း(မ်) ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် People Online SoccerMyanmar Flashband Burmeseclassic ရွှေအိပ်မက် သနပ်ခါး ညကဗျာ
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်ဆိုင်များ လေ့လာရန် မြန်မာ မြန်မာသတင်း မြန်မာဂျီနီဗာ အမြင်သစ် Planet Myanmar ရန်ကုန်စီးတီး ရန်ကုန်ဂလိုဘယ် MRTV-3
ကျန်းမာရေးနှင့်ဂိမ်းများ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ Novelgames Flash Games
ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာများ Simple Help PC Help Computer Technology Education soffware ESP Okino Graphics Dictionary&Thesaurus Learning Page Share Me Filehippo Photo Editor
နည်းပညာလမ်းညွှန်များ MMSO MYSTERY ZILLION Exam Collection CAD for Myn KPZ CreativeLayer ရိုးရာ MyanmarLensman နဂါး မြန်မာဖိုတိုရှော့ မျိုးဇော်လင်း PHPMyanmar Zack Notes ICT Readers KnowledgeBridge
စွယ်စုံကျမ်းနှင့် အဘိဓာန်များ Planet Ornagai WikiMyanmar စိုင်းအဘိဓါန် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ
ပြည်တွင်းသတင်းလမ်းညွှန်များ စွယ်စုံ ရိုးရာလေး MMDailynews ပုသိမ်မြို့တော် မြန်မာစာပေနှင့်စာနယ်ဇင်း The VOICE ခေတ်လူငယ် All Channel ရန်ကုန်မီဒီယာ မြန်မာပို့စ် လမ်းသစ်ဂျာနယ်
မန္တလေးစီးပွားရေးလမ်းညွှန် GoldenCity မန္တလေးသတင်း MyanmarExpo နောင်မွန်း Trade Exchange MyanmarBizPortal Invest Myanmar OMyanmar ဈေးကွက်ဂျာနယ် Estatemm eTradeMyanmar
အားကစားနှင့်မိုးလေ၀သ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ကမ္ဘောဇအက်ဖ်စီ ဇေယျာအက်ဖ်စီ ဒယ်လ်တာယူနိုက်တက် မကွေး ရတနာပုံ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ခြင်းလုံး ထွန်းလွင် MMWEATHER မိုးလေဝသ၊ဇလဗေဒဦးစီးမှုဌာန တယ်လီဖုန်းဒစ်ရှင်နရီ ရန်ကုန်ဒစ်ရှင်နရီ Yellow Map Page မြန်မာစားတော်ဆက်
တိပိဋက စာပေ လင့်များ
BUDDHIST DICTIONARY -A-
::: Myanmar Tipitaka :::
Dhamma download web about Theravada Buddhism Vipassana Meditation abhidhamma Video MP3 Audio e-Books library
DhammaBank: Buddha Dhamma Library
မြန်မာ့ ဘက်ပေါင်းစုံ ဘလောဂ်များ
- သုတရသ ဘလော့ဂ်များ - ကိုပေါက်ရဲ့မှတ်စုလေးများ ညီနေမင်း နည်းပညာ Blogger မောင်မိုး
- နည်းပညာ - kp-3 နည်းပညာ ထားဝယ်နေမျိုး ကိုစံပီး
မြန်မာ့ အဆိုတော် သဲနုဝါ
Kant Kaw Dream (Ma Thea Nu Mar)
Kabyar Yay Per Oo (Ma Thae Nu War)
မြန်မာ့အဆိုတော် မသဲနုဝါ သီချင်းများ
တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း | Create Your Badge
ဝေဒနာ ခရီးသွား (၁၂၂)
သံသာရာ ငွေတမက် (၁၂၁)
ဆူးနစ်ခဲ့ ဘဝအဓိပ္ပာယ် (၁၂၀)
ခေတ်နောက်က ငါတို့ပါ (၁၁၉)
ဘဝမှတ်တိုင်နဲ့ သံသာရာလွင်ပြင် (၁၁၈)
ငါ့သမိုင်း ငါ့ရင်ခွင် ငါ့အပြစ်ပါ (၁၁၇)
၁၃ ဖေဖော်ဝါရီကို လွမ်းဆွတ်ခြင်း (၁၁၅)
ဖေဖော်ဝါရီ လောင်တိုက် (၁၁၄)
လူစွမ်းကောင်းရဲ့ ဘွဲ့ထူးများ (၁၁၃)
အမိမြေရဲ့ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း ကိုယ်စားပြုသော မှတ်တိုင်
ဘာသာရေး စာပေ လင့်များ
Sitagu Sangha Vihara (Florida, U.S.A)
မဟာရဋ္ဌနိဒါန်း (၃) ဘုံဘေ
" မနာပဒါယီ "
International Institute of Abhidhamma
Announcement of Superior Diploma of Abhidhamma Courses Level II
Dhammaloka Buddhist Society
Watch Live Patthana Recitation
ကုလားဝဋ်မှ (90) ရာခိုက်နှုန်းကျွတ်ပြီ လွတ်ပြီ
ကိုယ် တွေ့ကြုံဖူးတဲ့ မှတ်တမ်း
Dhammaduta Dr. Ashin Pannyissarra Official Webpage | www.dhammadutabago.net
Zar Li Tun's Posts - ကမ္ဘာသစ်
SITAGU :: SITAGU
Myanmar Monk-Students' Welfare Association of India
DHAMMA HOME - SHWE WAR WIN . SMC
World Buddhist Community
SECCA ချစ်သူများအတွက် အထူး အခွင့်ကောင်း
တပ်မတော်သား အချို့ အသတ်ခံရမှု ကေအိုင်အေထံ အစိုးရ ဖြေရှင်းချက်တောင်း
ကျွန်တော်ဘ၀၏ အရေးကြီးသော အရာဟူသည် မိဘနှစ်ပါးလွဲရ်ျ မည်သူမှမရှိပါ။
တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း၏ အကောင်းဆုံး ကဗျာဆု
ဆုကဗျာရဲ့ Fancy Journal
Ms. SU KA BYAR Publisher Fancy Journal ( စိတ်ကူးစွမ်းအားဂျာနယ်) NO. 32 , Room (5-A+ B) , Kyundaw Road, Sanchaung Township, YANGON, MYANMAR. Email: fancy.academy@gmail.com Web: http://fancyjournal.mmblogger.info/
ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးမှာ ဝက်ဆိုဒ်များ
ရနျကုနျမွို့၊ ဗဟိုဆောကျလုပျရေးသငျတနျးကြောငျး(သုဝဏ်ဏ)၌ ကြှမျးကငျြမှု အသိအမှတျပွုလကျမှတျ ပေးအပျပှဲ ကငျြးပခဲ့ခွငျး
အမှတ် (၁) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အမှတ် (၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန
ဆက်သွယ်ရေး စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ဝန်ကြီးဌာန
စီပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး အဖွဲ့
မြန်မာ့ စာအုပ်စင်နှင့် သတင်းဂျာနယ်များ
First- eleven magazine
weekly eleven magazine
ဆဲဗင်း(န်) ဒေးလ် နယူး
ပီစီ ဝေလ် မဂ္ဂဇင်း
မြန်မာ ပင်မ သတင်း
နိုင်ငံအသီးသီးမှ မိတ်ဆွေ ရွှေဧည့်သည်များ
Where is the true Man's Nibbana?
Is it where he by chance is born?
Dot not the yearning spirit scorn
In such scants borders to be spanned?
O, yes! His Nibbana must be
As the Dependent Origination wide and free!
Is it alone where freedom is,
Where being is being and Man is Man?
Dot he not claimaborder span
For the Non-Soul's love of home than this?
O,yes! His Nibbana must be
Where' erahuman heart dot wears
Job's myrtle-wreath or sorrow's pyres,
Where' erahuman spirit strives
Inalife more true and fair,
There is the true man's birthplace grand,
His isaworld-wide Nibbana!
Where' erasingle slave dot pine.
Where' er one man may help another,
Think Do for suchabirthright, brother,
That spot of earth is thin and mine!
နည်းပညာ လေ့လာရန် လင့်များ
LastPass For Windows 4.1.58
Forums - Part One (Benefits)
နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Bare Bones Software | Welcome
Welcome To KG Site
.:: M M G ::.
♥♥[အမေ့မေတ္တာရိပ်အောက်က မိသားစုလေးတွေကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုနေပါသည်။ အမေ့မေတ္တာအကြောင်းကို ရေစက်တစ်ပေါက်လောက် မျှဝေမိသော်လည်း နားလည်မှုအပြည့်ရှိသော အသိဖြင့် လက်ကမ်းနေလျက်ပါ။]♥♥
ဘဝ အနိမ့် အမြင့် လှေခါးထစ်များ
ဘဝ အနိမ့် အမြင့် လှေခါးထစ်များ အပျော်တမ်းဆိုတာ.... အထက်တန်း အလွှာရဲ့ ကစားစရာ အရုပ်ကလေး တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျေးကျွန်ပေါ့...။ အနိမ့် အ...
စာအုပ်များ ထွက်လာပါပြီ by venpunnavamsa
မြန်မာကြွေးမြီ ဂျပန် လျှော်ပေး
(Photo-AFP) မြန်မာကြွေးမြီ ဂျပန် လျှော်ပေး VOA , 21 April 2012 — မြန်မာပြည်က ဒီမိုကရေစီနဲ့...
အနှစ်မရှိတဲ့ နေ့ ရက် ... ဂိတ်မရှိတဲ့ တံခါး ... အချိတ်အဆက်မရှိတဲ့ စကား ... အပြောကျယ်တဲ့ လွင်ပြင် ... ထာဝရ ဖွင့်ထားတဲ့ အိမ် ... ...
မကြာမီ စာအုပ် သုံးအုပ် ထွက်တော့မည်
ခွန်အားပေး ဆေးတစ်ခွက်ပါ သူငယ်ချင်း
အချစ် ကံခေလို့ အထီးကျန်စေခဲ့သော်
အချစ် ကံခေလို့ အထီးကျန်စေခဲ့သော် အချစ် ကံခေလို့.... အထီးကျန် စေခဲ့တယ်ဆိုရင်... ဘဝရဲ့ အခန်းကျဉ်းထဲမှာ လိုအပ်ချက် အပြစ်အနာဆာ...
အတ္တမဲ့ ကွက်လပ်ဖြည့် (၄၅)
တစ်ပါးသူကို အထင်ကြီး စိတ်ကြီးဝင် မာနတွေ ရင်မှာခိုအောင်းလို့ အထင်သေးခံလိုက်ရတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု တန်ဘိုးအားဖြင့် တိုင်းတာကြည့်ခြင်းက အရာေ...
မြန်မာသတင်းများ မေလ ၀၂ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်သူ့ဆန္ဒအရ လွှတ်တော်တက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆ...
မျိုးဆက် မကွာဟခြင်း (သို့မဟုတ်) ဒဂုန်တာရာနှင့် ထူးအိမ်သင်
မျိုးဆက် မကွာဟခြင်း (သို့မဟုတ်) ဒဂုန်တာရာနှင့် ထူးအိမ်သင် မိုးဝေ စာပေမဂ္ဂဇင်းကို ဆရာနတ်နွယ် ဦးစီးခဲ့သောကာလ။ ၁၉၇ဝအလွန် မင်းသား ကြီး ကောလိပ...